Idarac® (အိုင်ဒရက်ခ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Idarac® (အိုင်ဒရက်ခ်)
Idarac (အိုင်ဒရက်ခ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Idarac® (အိုင်ဒရက်ခ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Idarac (floctafenine) ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာ များအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Idarac (floctafenine) ကို ယာယီ အနာသက်သာစေရန် အသုံးပြုသော စတီးရွိုက်မပါသော အရောင်ကျ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အဖြစ် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
Idarac (floctafenine) ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါ သလဲ။
အသုံးမပြုခင်တွင် အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
သင်မရှင်းတာ ရှိသော်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွှေးနိုင်ပါသည်။
Idarac (floctafenine) ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်း ထားသင့်ပါသလဲ။
Idarac (floctafenine) ဆေးကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မ ထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံး သိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှု တွေမဖြစ်အောင်လို့ ဆေး ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်း တာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူ တည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန် ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။
ဆေးကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Idarac (floctafenine) ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Idarac (floctafenine) တွင်ပါဝင်သောပစ္စည်း များနှင့်ဓါတ်မတည့်သောသူ
အခြားဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး နှင့် တိရစ္ဆာန် အမွေးအမျှင် များနှင့် ဓါတ်မတည့်သောသူ
တချို့သောကျန်းမာရေး အခြေအနေ နှင့် လက်ရှိ သောက်သုံးနေသောဆေးဝါးများသည် Idarac ဆေးသောက်ပါက ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သောကြောင့် ရှိလျှင် ပြောပြရန်
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေ ချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အတွက် လုံလောက်သော အချက်အလက်များမရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပထမ ၃ လ နှင့် နောက်ဆုံး ၃ လ တွင် ရင်သွေးလေးနှင့် မီးဖွှားတာ ကိုထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် အမှန်တကယ် လိုအပ်မှသာလျှင်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ဆေးသည် နို့ရည်ထဲတွင်ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် နို့တိုက်ချိန်တွင် မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင် ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Idarac (floctafenine) က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
Idarac (floctafenine) ကိုသောက်ပါက ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်သော်လည်း အများစုမှာ ဖြစ်ခဲကာ ကုသမှုမလိုအပ်တာများပါသည်။ သို့သော်လည်း သင့်တွင်ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သော ဆိုးကျိုးအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်း
အာရုံကြော သို့ သက်ရောက်မှုရှိခြင်း
Toxic epidermal necrolysis (အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်သော အရေပြား ဆဲလ်သေ၊ကွာကျ၊ပိုးဝင် ရောဂါ)
Stevens-Johnson syndrome (ဆိုးရွားပြင်းထန် ဓါတ်မတည့်ရောဂါ)
Pulmonary eosinophilia (ဆင်ခြေထောက်ပိုး ကြောင့်ဖြစ်သော ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကျပ်ထ၊ ဘေလုံးကြီး ပြဿနာ)
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Idarac (floctafenine) နဲ့ ဓါတ်ပြု မှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Idarac (floctafenine) ဟာ သင်အခုလောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိ သောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့ စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများသည် ယခုဆေးနှင့် ဓါတ်ပြုခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကင်ဆာဓါတုဆေး ။ methotrexate
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Idarac (floctafenine) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Idarac (floctafenine) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုး သက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှု တွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာ တွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Idarac (floctafenine) နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Idarac (floctafenine) ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအ ခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်း ကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အစာလမ်းကြောင်းနှင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် ရောဂါရှိသောသူ
သွေးရောဂါ ( သွေးအားနည်းရောဂါ၊ သွေးမတိတ် ရောဂါ )
နှာခေါင်းတွင်း အသားပို၊ အလုံး ရှိသောသူ
မိမိ ခန္ဓါကိုယ်က ဆဲလ်များကို ပြန်တိုက်ခိုက်သော ကိုယ်ခံအားရောဂါ (ဥပမာ- အရေပြား လေးဖက်နာ)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Idarac (floctafenine) ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအချိုးအစားမှာ နေ့စဉ် တစ်ရက်ကို ၁.၂ ဂရမ် အထိ အကြိမ် ရေ ခွဲ၍ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ အသက် ကြီးသူများတွင် ဆေးအချိုးအစားကို လျှော့သင့်ပါသည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Idarac (floctafenine) ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Idarac (floctafenine) ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Idarac (floctafenine) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၂၀၀ မီလီဂရမ် ဆေးတောင့် ပုံစံနှင့်ရနိုင် ပါသည်။
ဆေးသောက်ဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) ဘာလုပ် ရမလဲ။
Idarac® (floctafenine). http://www.whocc.no/atc_ddd_index/code=N02BG04&showdescription=yes. Accessed October 18, 2016.